नेपालमा कोरोना नियन्त्रण बाहिर जान लागेको भन्दै आयो डरलाग्दो चेतावनी, स्थिति भयावह हुनसक्ने — Sanchar Kendra
१विश्वभर ४ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
२दशैंकाे दिन विहानै काठमाडाैंबाट आयो दुखद खबर, कसरि घट्यो यस्तो घ’टना ?
३जो जहाँ छौँ, त्यहीँ रहेर दशैँ मनाऔँ- प्रधानमन्त्री ओली
४सामाजिक दूरी कायम गरी दसैं मनाउन राष्ट्रपतिको आह्वान
६दशैंको टीका र जमरा कता फर्केर लगाउदा उत्तम हुन्छ ? पश्चिम की पूर्व
७आज विजयादशमी, टीकाको उत्तम साइत १० बजेर १९ मिनेटमा
८दशैँको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले गर्यो यस्तो अपिल, सबैले थाहा पाउनुपर्ने
९सामाजिक अभियान्ता कार्कीकाे रिहाईका लागि सर्वाेच्चमा रिट, २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित हुन आदेश
१०काठमाडौं उपत्यकामा थपिए १,५३५ जना नयाँ कोरोना संक्रमित
११थप २८५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१२विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ४ करोड २९ लाख नाघ्यो
काठमाडाैं । केही जिल्लामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले मास टेस्टिङ अर्थात् ठूलो सङ्ख्यामा जनसमुदायमा गरिने परीक्षण थालेको जनाएको छ। भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको र जनस्वास्थ्यकर्मीले समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएको आशङ्का गरेका बेला सरकारले मास टेस्टिङको काम थालिएको जनाएको हो।
डा. मरासिनीले भने: “दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण पुर्‍याइएन भने निकै भयावह अवस्था आउनेछ। अबको १५/२० दिनमै नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने गरी सङ्क्रमण देखिनेछ।” तर सरकारी अधिकारीहरू भने अहिलेसम्म समुदायस्तरमा सङ्क्रमण पुगिनसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, “हामीले जुन मापदण्ड मानेर स्थानीय स्तरमा छ/छैन भन्ने यकिन गर्ने हो। त्यो हेर्दा समुदायस्तरमा देखिएको छैन।” सरकारले करिब ४५,००० को मास टेस्टिङ गर्ने भन्दै काठमाण्डूमा परीक्षण थालेको थियो।
काठमाण्डूमा ५,००० परीक्षण गर्दा जम्मा तीन जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्न भनेर दुई दिनदेखि काम सुरु भएको डा. अधिकारीले बताए।
उनले भने, “काठमाण्डू प्रवेश गर्ने नाकाहरूबाट परीक्षण गर्दा कुन क्षेत्रका मानिसमा सङ्क्रमण छ भन्ने थाहा पाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामीले थालेका हौँ।” “जुन क्षेत्रका स्थास्थ्य अधिकारीबाट सङ्क्रमणको विषयलाई लिएर चिन्ता बढेका छन् ती क्षेत्रमा मास टेस्टिङ गर्ने भनेर काम थालेका छौँ।” उनका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रहरूमा काठमाण्डू, मोरङ, कास्की, बाँके, रुपन्देही, बारा, पर्सा र सप्तरी छन्।
मानिसको सङ्ख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने सङ्क्रमण हुनसक्ने स्थानममा समुदायस्तरमा सङ्क्रमणको अवस्था जान्नका लागि जनसमूदायमा गरिने परीक्षणलाई मास टेस्टिङ भनिन्छ। मास टेस्टिङ यसअघि नेपालमा हुँदै आएको परीक्षणभन्दा फरक हो।
अहिलेसम्म विदेशबाट आएका र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको मात्रै परीक्षण गरिन्थ्यो। “स्थानीय स्तरमा समुदायमा हुनसक्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि ती क्षेत्रमा सङ्क्रमणको अवस्था के छ भनेर बुझ्न मास टेस्टिङ सुरु गरेका हौँ,” डा. अधिकारीले भने।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने मास टेस्टिङको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्। डा. मरासिनी भन्छन्, “मास टेस्टिङ गरेको भोलिपल्ट उनीहरूलाई सङ्क्रमण नहुने भन्ने हुँदैन।” “त्योभन्दा विगतमा आरडीटी गरेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अस्पतालमा दमको बिरामी र शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकको परीक्षण गर्नुपर्छ।”
“सङ्क्रमण देखिएकाहरूको सक्रिय निरीक्षण गरेर त्यो अनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ।” उनका अनुसार मास टेस्टिङ गर्नुभन्दा परीक्षण गर्ने क्षेत्र र क्वारन्टीनमा राखेर परीक्षण नगरी घर पठाइएकालाई परीक्षण गर्नुपर्छ। “मास टेस्टिङ समस्याको समाधान होइन त्यसैले समुदायमा जहाँजहाँ जोखिम देखिएको छ त्यहाँ टोली पठाएर सङ्क्रमणको जाँच गर्नुपर्‍यो,” उनले भने।
“स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीका नमुना लिएर जाँच्नुपर्छ। त्यसबाहेक विदेशबाट आएकाको परीक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।” कतिपय स्थानीय निकायले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको भन्दै सूचना जारी गरेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि नगरभित्र सामुदायिक रुपमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सोमवारदेखि अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरेको छ। वीरगञ्जमा पछिल्ला दिनमा सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको डा. मरासिनीले बताए।
उनले भने, “वीरगञ्जमा सबैजसो अस्पतालमा सङक्रमण देखिएर बन्द हुन थालिसके। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएका छन्।” “अब हामीले दैनिक १०,००० को सङ्ख्यामा परीक्षण गरेनौँ भने अवस्था नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भएर जान्छ।” बीबीसी नेपाली
विश्वभर १ करोड ८४ लाखभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार यो समाचार तयार पार्दासम्म एकै दिन १ लाख ९९ हजार ३१२ जना संक्रमित भएका छन् । योसँगै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या १ करोड ८४ लाख ३४ हजार ८८३ पुगेको हो ।
कुल संक्रमितको ६० प्रतिशतभन्दा बढी निको भएका छन् । मंगलबार बिहानसम्म १ करोड १६ लाख ६५ हजार ६६६ जना निको भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ लाखभन्दा बढी निको भएका छन् । यस्तै एकै दिन ४ हजार ३६६ जनाको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ६ लाख ९६ हजार ८१७ पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरूमा २ लाख ४ हजार ५९ जनाको मृत्यु भएको छ । २९ लाख २३ हजार ५९० जना संक्रमित भएकोमा १७ लाख ५५ हजार २०४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा २ लाख २२ हजार ८२० जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ५७ लाख ९ हजार २३३ पुगेको छ । त्यसमध्ये २९ लाख ८९ हजार ५२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरूमा १ लाख ६७९ जनाको मृत्यु भएको छ । ४५ लाख २३ हजार ३५१ जना संक्रमित भएकोमा ३३ लाख ५७ हजार ७७१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा १ लाख ४८ हजार ३२७ जनाको मृत्यु भएको छ । ४२ लाख ८५ हजार ५९४ जना संक्रमित भएकोमा २९ लाख १७ हजार ७८३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरूमा २० हजार ६७१ जनाको ज्यान गएको छ भने ९ लाख ७२ हजार २८७ संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये ६ लाख ३२ हजार ९२९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरूमा २४६ जनाको मृत्यु भएको छ । २० हजार १०७ जना संक्रमित भएकोमा १२ हजार २७६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।